Xog: Axmed Madoobe oo soo ceyriyey wakiilkii Kheyre | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xog: Axmed Madoobe oo soo ceyriyey wakiilkii Kheyre
Xog: Axmed Madoobe oo soo ceyriyey wakiilkii Kheyre
Kismaayo (Dalkaan.com) – Madaxa olelaha Xasan Cali Kheyre ee Jubaland Axmednuur Maxamed Axmed “Uleex”, horayna u ahaa xoghayihii joogtada ahaa ee xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa laga soo ceyriyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka u ah Jubaland, sida ay ogaatay Dalkaan.com.
Dalkaan.com ayaa sioo kale ogaatay in la xiray dhowr guri oo muddoyinkii ugu dambeeyay uu ka socday ololaha musharax madaxweyne Xasan Cali Kheyre, oo isku dayay in uu xildhibaanno isaga taageersan ka soo saarto Kismaayo.
Ciidamada ammaanka ayaa ku wargeliyay Axmednuur in uu Kismayao uga baxo muddo 24 saac ah horraantii bishan Janaayo, iyaga oo u sheegay in ay tahay amar dhanka mas’uuliyiinta sare uga yimid. Axmednuur waxa uu ka soo jeedaa Jubaland waxa ayna isku heyb yihiin madaxweyne Axmed Madoobe.
Sida ay fahansan tahay Dalkaan.com, Axmed Madoobe waxa uu dhowaannahanba cadaadis kala kulmayay beesha Absame oo uu ka soo jeedo Cabdikariin Muuse “Qalbi-Dhagax” oo dhowr kulan oo ay la galeen u sheegay in aysan isbaheysi siyaasadeed la sameysan karin Xasan Cali Kheyre.
Axmednuur Uleex ayaa kalsooni badan ka heystay Axmed Madoobe oo ay reer ahaan isku dhowyihiin, muddooyinkii dambane la-taliye u ahaa, isaga oo Kheyrana muddo dheer lasoo shaqeynayey. Xiriirkaas labada dhinac ah ayaa la filayay in uu isku dhoweyn karo Kheyre iyo Axmed Madoobe, balse hadda waxay u muuqataa in xisaabaadka qabaa’ilka iyo kan siyaasadda ay rajadaas meesha ka saareen.
Ciyaar aad loo wada sugayo ayaa ka dhici doona garoonka San Siro , markaasoo kooxda heysata Scudetto ee Inter Milan ay la ciyaari doonto...
QM oo digniin cusub kasoo saartay xaaladda Soomaaliya
Muxuu CC Shakuur ka yiri eryida Fransisco Madeira?
Dowlada Mareykanka oo iska fogeysay arrin muran dhalisay oo ay sameysay...
Weeraradii Liido & Gaalkacyo &ndash; laba xaalad oo is shabaha